Dadka kama yaraateene waad is-daba-jareysaan…!!! | Arimaha Bulshada
Dadka kama yaraateene waad is-daba-jareysaan…!!!
June 22, 2007 at 5:18 pm | Posted in maqal, Sheeko | Leave a comment
Allow muxuu aragti dheeraa, waaya-aragnimo badnaa, Soomaali u fiirsaday, yaqaannay oo runna ka sheegay: Cabdullaahi Suldaan (Tima-cadde) goortii uu tiriyay Gabaygiisii taariikhiga ahaa ee ay beydadkiisu ka midka ahaayeen (a) Dugsi ma leh qabyaaladi, waxay dumiso mooyaane!! (b) Dadka kama yaraateene, waad is-daba-jareysaane..!!
Ma mooddaan inuu la hadlayo Soomaalida maanta joogta, iyadoo ay sii horreysay markii uu gabaygaas ka tiriyay Soomaalida!!
Inkastoo aan beri-samaadkii marar badan gabaygaas ka maqli jiray Radio Mogadisho, buugaag Afka Soomaaliga ku qoranna aan hore uga daalacday, haddana Oday Soomaaliyeed oo aannu saaxiibbo nahay (Xasan Beyle) ayaa dib ii soo xusuusiyay beydad ka mid ah gabaygaas maalmihii ay deegaanka loo yaqaanno ‘Darroor’ isku hayeen oo ku dirirayeen laba beelood oo Soomaaliyeed oo iyagu dad isu-xiga!!
Odaygaas Soomaaliyeed waxaannu badanaaba iska wareysannaa, kana sheekeysannaa “Arrimaha murugsan” ee dalka ka taagan ee dayaca iyo dac-darrada badaya dadka Soomaaliyeed. Waxaan maalmihii uu dagaalku ka socday “Darroor” aan weydiiyay saaxiibkey: reer ahaan waxa ay kala yihiin labadaas beelood iyo sababta ay isu gumaadayaan, oo u dirirayaan bal hadduu igu dhaamo, oo fikrad iga siin karayo..? Wuxuu iigu jawaabay, oo igu yiri:” Wadaayow, Abwaankii “Tima-cadde”, ayaa Allaha u naxariistee hore uga gabyay Soomaalida oo yiri: ” (1) Dugsi ma leh qabyaaladi, waxay dumiso mooyaane..!! (2) Dadkaan la hadlayo baan lahayn dux iyo iimaane…!! (3) Waa waxaa dalfoofoo Caqligii Doonni laga saaray..!! (4) Dadka kama yaraateene, waad is-daba-jareysaane..!! (5) Anun baa damqanayee, dheguhu uma doleelaane…!! Waxaannu Saaxiibkey isla lafa-gurnay nuxurka, dulucda iyo ujeeddada gabaygaas iyo xaaladda hadda ka taagan dalka, guud ahaan, siiba “Qabyaaladeynta”.
Markii aan gadaal ugu laabtay Aqalkayga, ayaan bilaabay inaan is-weydiiyo, dibna uga fekero guud-ahaanba dagaallada sokeeye ee “Somalia”, anigoo isla markaasna dib u dersaya dulucda gabaygaas, gaar ahaan beydka ah:-“Dadka kama yaraateene, waad is-daba-jareysaane”.
Boqollaal sano oo la soo dhaafay, ayay dadka Soomaaliyeed ee isku-deegaanka ahi dagaallo dhexdooda ah isaga hor-imaan jireen, siiba xoolaleyda reer Miyiga ah; waxayna sida ay taariikhdu xuseyso, Odayaashuna sheegayaan, sababaha dagaalladaasu ahaayeen kuwa ka dhalanayay: Ceelasha, Daaqa, Dhulka-daaqsinka ah, Mag, Aano qabiil iyo markii dambe Baraago iyo Barkadaha laga cabbo ; kuma ay lug lahayn dagaalladaasu siyaasad.
Dagaallo badan, oo ay qaarkood caan yihiin, ayay Ceelashu sababeen, sida laga fahmi karayo murtida ah:” Markii ay Ceelalyo heshiiyaan, ayay xooluhu(Geelu) cabbaan”. Dagaallo badan oo miyiga ka dhaca , oo noocyadaas ah, ayay dad Soomaaliyeed weligood iyo haddaba weli ku le’daan.
Waayadii hore, waxay Soomaalidu isu adeegsan jireen hub ay ka mid ahaayeen : Fallaaro iyo Qaansadood, Waran iyo Gaashaan, Seef iyo Toorey iwm. Hubkaas aan casriga ahayn wuxuu koobayay tirada dadkii la iska dilayay, marka la bar-bar-dhigo sida aynu hadda isugu adeegsanno noocyada hubka culus ee kala duwan, sida Madaafiicda, Qoryaha daran-doorriga u dhaca, Hoobiyayaasha iwm. kuwaas oo aannu ku heysanno degmo, tuulo iyo geed kasta hoostiis.!!!
Haddii aynu u soo talowno (gudubno) 20-sano ku-dhowaadkii ay dagaallada sokeeye ka aloosnaayeen gudaha dalka, waa ay ka duwan yihiin duluc, ujeeddo iyo hub ahaanba dagaalladaas hore. Ruux kasta oo Soomaaliyeed oo qaan-gaar ah ayaa iiga marag-kici kara is-gumaadkii, is-xasuuqii, kala aar-goosigii iyo is-dilkii qaababka iyo wejiyada kala geddisan lahaa ee dhacay, welina socda.
Qabaa’il Soomaaliyeed, oo uu Cadowgu soo hubaynayay iyo Ciidamadii Dawladdii dhexe ee Soomaaliya, ayaa isku dhacay bilowgii horeba. Laba Qabiil oo waaweyn oo Soomaaliyeed, ayaa isu tafa-xeytay, oo qoorta la isu-geliyay si loo gaaro ujeeddo gaar ah. Jilibyo isku beel ah baa hoos dib isugu soo noqday, oo dukun-daakun iska yeelay. Aano iyo aar-goosi qabiil ayaa geed iyo guri kasta la isugu soo galay. Dawlado taag-daran oo dib-u-heshiisiin amaba qaab jujuub ah ku dhashay ayaan hore u socon, oo tallaabsan kari waayay…!!
Si kasta u dhiga, oo ila eega: Wiil Soomaaliyeed oo ku dhintay mooyaane, waa kee wiilka ku dhashay dagaalladaas ?!!!. Soomaali un baa is-gumaadeysay. Dhiig Soomaaliyeed oo muslim sheeganaya un baa dareerayay oo qubanayay, waana aan isa sii daba-jareynay intaas oo dhan, weliba ma aanan ka-waantoobin falalkaas…!!. Warba uma heyno -malaha- Xadiiskii Nebiga ( NNKH ), ee ahaa:” Haddii laba muslim ah ay dagaal isaga hor-yimaadaan, kan wax dilay iyo kan la dilayba waa ahlu-naar”. Xitaa kii ka badbaada xabadda tooska ah, gaajo ayaa disha amaba badda ayuu ku halligmaa, isagoo badbaado-doon ah…!!!.
Qaab qaldan un baannu u xisaabtameynaa oo “Xukun” ku dooneynaa, umaba qiirooneyno qarannimadeennii iyo midnimadeennii sharafta lahayd ee aannu qabyaaladeynta iyo is-quursiga isaga qarribnay !!
La soco qaybta kale…